စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuatသို့မဟုတ် ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usages.AOX-မေး စီးရီး စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuatသို့မဟုတ် drive အားဖြင့် 380V / 220V / 110VAC သို့မဟုတ် 24V / 110VDC ပါဝါ, သွင်းအားစု 4-20mA သို့မဟုတ် 0-10VDC ထိန်းချုပ်မှု signal ကို, ရွေ့လျား အခင်အရှင် သို့ အဆိုပါ မှန်သော အနေအထား, နှင့် အောင်မြင်မှု သို့ auသို့matic ထိန်းချုပ်မှု, အဆိုပါ အများဆုံး output ကို tသို့မဟုတ်que ဖြစ် 5000Nm.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tributသို့မဟုတ်s နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု။
AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက်ရရှိနိုင်ဗို့အား၏ 1. Wide အကွာအဝေး။
အဖုံးနှင့်အိုးအိမ်များအကြား 2. Tapered interface ကို: ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အိမ်ရာကနေလွယ်ကူသောရုတ်သိမ်းအဖုံးဖွင့်သည်။
လေးပုံတပုံအလှည့် actuator စက်တပ် AOX-မေးစီးရီးများအတွက် 3. Window: Polycarbonate င်းဒိုး built-in O-ကွင်း, fixed သတ္တုဂလင်း, အဂလင်းကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လွယ်ကူရေ, ကာကွယ်တားဆီးဖို့နှစ်ခုရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူကြွလာ။
AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ကျယ်ပြန့်ရေကုသမှု, အပူ, ရေနံ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူချမှတ်ခြင်း, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, ရောစပ်အသစ်စွမ်းအင်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူ, AOX ၏ R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျွန်တော်ကောင်းစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းနမူနာပေးနှင့်အချို့သောအသေးအမိန့်ကိုထုတ်လုပ်ဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator.We ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
မေး: သင်သည်သင်၏ AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ဘို့မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-မေးစီးရီးစက်တပ်လေးပုံတပုံအလှည့် actuator စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်